Shina kalitao tsara indrindra 16oz Glass Mason Jar miaraka amin'ny orinasa Fission Silver Lid sy mpamatsy | Hoyer
Kalitao mety tsara 16oz Glass Mason Jar miaraka amin'ny tahiry volafotsy Fission
Azo antoka sy azo antoka: io jarina mason-gazo tsara tarehy io dia vita amina fitaovana milay eco, amin'ny alàlan'ny firaka maimaimpoana ary ny BPA maimaim-poana dia mahomby amin'ny 100% ny fahasalamana, ny lela volafotsy dia manana taratasy fanamarinana LFGB ary miorim-paka, afaka mahazo misitraka azy ireo ianao tsy misy ahiahy ny kalitao.
Volume: 480ml / 16 oz
Haavo: 125mm / 4.92 santimetatra
savaivony: 80mm / 3.14 santimetatra
vozony: 70mm / 2.75 santimetatra
Mahafinaritra sy manintona: ity tavoahangy vera ity dia misy endrika marika malaza ary ny endrika mazava dia mahatonga anao ho mora mahita izay ao anatiny ary rehefa handeha ny sakafo. Ny fonony mifatotra dia mora mikitika sy manala, ary tena tsara ny fanginan-drivotra, ny sakafo ao anatiny dia afaka tahiry mandritra ny fotoana lava.
Fampiasana samihafa: Azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo amin'ny zaza, jam, jelly, zava-manitra, voankazo, tantely, ny ranom-boankazo na ny labozia vita tanana, izany ihany koa dia safidy tonga lafatra amin'ny fanomezana ho an'ny mariazy, efitrano fampisehoana, fety. Na izany na tsy izany dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny ankamaroanao.
Safidy tsara ho an'ny fanomezana DIY: azonao atao ny mampiasa io tavoahangy io mba hametahana ilay fanomezana tadiavinao, azonao atao ny mametaka marika eo ivelany, na mametraka taratasy miloko marevaka, miaraka amin'ny famoronana tokana, mety hampiseho ny fonao amin'ny hafa izany.
Size Boky: 480 ml lanja: 300 g Haavony: 125 mm Diameter: 80 mm
Boky: 16oz lanja: 0,66 pounds Haavony: 4,92 santimetatra: 3.14 santimetatra
Ny tenda: 2,75 santimetatra
Color mazava ny fanaovana pirinty na ny loko hafa dia azo ekena ihany koa
Previous: Jarina fitahirizam-bary mahitsy, Jar-bary fitetezana vera miaraka am-borona
Manaraka: 10ml Amber Glass Rolling tavoahangy misy tavoahangy miaraka amin'ny Stainless Steel Roll Ball
tavoahangy fitaratra misy sarony